Indlela yokubuyisela isifuba emva kokubeleka?
Ngokungathandabuzekiyo, injongo ephambili yebhokhwe yamabhinqa kukunyusa umntwana, kodwa inani elihle alikho ngaphandle kwesifuba esihle. Emva kokugqiba ukuzala umntwana, umfazi uhlala exhalabisa ukuba imfuyo yamathambo akhe iya kutshintsha kwaye ayenze ibe mnandi. Siza kuzama ukucacisa ngokucacileyo: kutheni emva kokuzalwa, isifuba sogxa kunye nendlela yokugcina isifuba emva kokubeleka?
Yintoni kwaye kutheni isifuba sitshintsha emva kokunikezelwa?
Ngethuba lokukhulelwa phantsi kweempembelelo zamahomoni emzimbeni womfazi kukho utshintsho olulungiselela ukuzala nokunyusa umntwana. Utshintsho oluphawulekayo luya kubele, olusele luvela kwiiveki zokuqala zokukhulelwa kwaye luba lukhuni ngakumbi. Ekupheleni kwinyanga yesithathu yokukhulelwa, iimbumba zingakhula, zenze i-pigmentation emnyama, kunye nebele ikhule 1 okanye ngaphezulu ngaphezulu, ubukhulu bamanzi ( yellowstrum ) buyimfihlo kwixesha. Emva kokukhulelwa nokuzalwa, amanqaku atyaliweyo avela esifubeni, ehambelana nokunyuka ngokukhawuleza kwebele, xa ulusu lunalo ixesha lokusula.
Ubungakanani obunokutshintshwa kwesimo sebele kuya kuxhomekeka kwisimo sokuqala sebele. Ngoko, amabele amancinci kunye ne-elastic ahluka kancinci, kwaye inkulu kwaye ithambileyo, inokwenzeka, iya kulahleka ifomu elithile. Ukuba ibhinqa ngaphambi kokuba ukhulelwe libandakanyekile kwimidlalo, ngoko umzobo wakhe uza kukhawuleza ukubuyela kwimilinganiselo yangaphaya kunezinye. Ukugqoka ibhondi ngexesha lokukhulelwa kunye nokuncelisa kunceda ukugcina uhlobo oludala lwebele.
Iyeza zanamhlanje zinika iindlela ezahlukahlukeneyo zokubuyisela isifuba emva kokusondeza, phakathi kwazo kukho izinto ezinokwakheka (ezemveli kunye ezingezizo) kunye nokusebenza. Indlela yokumisa isifuba emva kokubeleka, ungafunda iingcebiso ezininzi kumaphephancwadi amabhinqa, kodwa kusebenza ngakumbi ukudibanisa neofisi yodokotela-cosmetologist.
I-Intanethi igcwele iintengiso malunga namandla amangalisa kuzo zonke iintlobo zeekrams zokunyamekela isifuba emva kokubeleka. Ezi zixhobo ziquka i-oli (umnquma, i-linseed), iifom ze-herbs (i-chestnut yehashe, i-chamomile, umthi weti), okwenza ulusu lube lukhulu kakhulu kwaye lukhenkce kwaye lususe umbane ogqithiseleyo ovela emzimbeni. Faka isicelo sokucetyiswa kabini ngemini, usebenzise ukhilimu elukhunjini lwesifuba kunye nokunyakaza okulula.
Ukuze ubuyisele ifomu yangaphambili, uqeqesho olukhethekileyo lwebele emva kokubeletha luphuhliswa. Nazi ezinye zazo:
intloko ijika emva kwayo nasemacaleni;
ngokukhawuleza, ukuphakamisa nokunciphisa amahlombe akho;
ukutsala iingalo zakho ezigqityiweyo;
Izandla zolulela emacaleni kwaye zijikeleze kwisangqa.
Ukusikwa kwesifuba emva kokunikezelwa
Ukuxiliswa kwesisu ngokubambisana nemisebenzi ekhankanywe apha ngasentla kunika umonakalo omhle. Oku akunzima kuwo onke, kwaye umfazi angakwenza ngokwabo ekhaya, kusasa nangokuhlwa emva kokuhlamba. Izandla kufuneka zifakwe ioli kunye negazi kunye nesifuba isisetyhula, ngaphandle kokuchukumisa ingono. Emva koko kuyimfuneko ukuqhuba ukunyakaza ukunyakaza kunye neengxowa zeminwe, kwaye izenzo akufanele zibangele iimvakalelo ezibuhlungu. Unokwenza ukunyakaza nokupasa, kunikezelwa ukuba abayi kuba buhlungu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo, indlela yokubuyisela isifuba emva kokuzalwa, zibandakanya: icompress yerhasi, i-starch, isitroji, i-walnuts kunye ne-rose petals. Izahlulo ezahlukileyo ziza kuphucula kuphela ukusebenza kakuhle kokuzilolonga nokuxilisa, into ephambili ayiyikuyidlulisela ngamanzi abandayo, ukuze kungabi nokufumana imastitis.
Ngoko, emva kokuqwalasela iindlela ezinokwenzeka zokubuyisela isifuba emva kokuzalwa, sigqiba: kuphela ukusetyenziswa okuxakekileyo kokuzivocavoca kunye nokuxilonga kuyakunceda umfazi ukuba aphinde abuyele kwiifomu zakhe zangaphambili, kwaye ukhilimu emva kokuzalwa kwebele kuya kuqinisa kuphela umphumo. Ngokusetyenziswa ngokukhawuleza kwamanyathelo angentla, umphumo uya kubonakala kwinyanga.
IAnesthesia kwicandelo laseKesariya
Ulwaphulo lokuqala lokuqala luqala njani?
Kutheni ungeke ulale ngesondo emva kokubeleka?
Uvavanyo lokuvuza kwe-amniotic fluid
Uterus emva kokubeletha
Iingubo zangaphantsi ezingenakukhutshwa emva kokunikezelwa
Ndiyakwazi nini ukukhulelwa emva kwe-laarean?
Bangaphi esibhedlele emva kokuhambisa?
Imvakalelo ngaphambi kokubeletha
Ukukhulelwa konyaka emva kokuvala
Ukuhanjiswa emva kwecandelo lesahara
Yintoni eyingozi yecesarean section?
Ukuzilolonga ngentambo yokudumbula
Ungatshintsha njani ukuba ungcono?
Impumlo ibanjwe kumntwana, akukho nyoka
U-Amanda Bynes ngokokuqala ngqa kwiminyaka engama-4 wanikela ingxoxo-ntetho ngobomi bakhe
Iimpawu ezihle kunye nezinye iindlela ezili-12 zokusebenzisa isikhokelo
Ukuzuza ubunzima bokukhulelwa ngeveki yetafile
Indlela yokutya imbewu yeepilisi?
Yintoni enxiba ingubo yomntu omnyama?
Ukuchonga ngesondo lomntwana ngegazi lokuhlaziywa
I-Festal - Analogues
Ikhekhe kunye ne-rhubarb - zokupheka ezimnandi kakhulu zokubhaka okungavamile
Ukuba umntu akayithandi ibhinqa - yintoni imiqondiso?
Iinqanaba zasebusika eziphathekayo
Ukukhumbula njani amaphupha?
I-recipe yewayini eneklasi edibeneyo ekhaya